maty – Page 2 – Midi Madagasikara
Antalaha : Fanafihana mitam-piadina, olona iray maty, 380 tapitrisa Ar voaroba
Redaction Midi Madagasikara 28 février 2014 Antalaha, Dahalo, Jiolahy, maty, polisy, Sambava, zandary
Tao amin’ny tokantrano iray, ny alin’ny faha-22 febroary lasa teo, no nisehoana fanafihana mitam-boadiana tao an-tampon-tanànan’Antalaha. Olona iray no maty tamin’ny fitifiranana nataon’ireto jiolahy ireto ary lasan’izy ireo koa ny lelavola mitentina 380 tapitrisa ariary. Nandositra ireo nahavanon-doza avy teo. Raha naheno ny vaovao ny zandary teto Sambava, fa nandositra any Antalaha izy ireo, dia…
Nanisana : Resevera maty voahitsaky ny taxi-be
Redaction Midi Madagasikara 21 février 2014 maty, Nanisana, Taxi-be, zotra 194
Noho ny fifaninana dia hadino tanteraka ny fitandremana. Dia hihafy amin’ny hetraketrak’ireo mpamily hatrany ve ny mpampiasa taxi-be? Namono olona indray ny fiara fitateram-bahoaka, ary tsy iza fa ny reseverany ihany no namoy aina vokatry ny hetraketraka sy ny tsy fitadreman’ny mpamily. Zava-doza tokoa no niseho tetsy Nanisana fa ilay taxi-be zotra 194 ihany no…
Antsirabe II : Lehilahy iray maty norasarasaina antsy
Redaction Midi Madagasikara 15 février 2014 Antsirabe, Jiolahy, maty, Tsarahonenana
Tamin’ny fomba feno habibiana no namonon’ireo jiolahy ilay mpivarotra omby tao amin’ny kaomina Tsarahonenana Sahanivotry Antsirabe II. Ankeviny efa fantatr’ireo jiolahy ihany ny fandaharam-potoanan’ity raim-pianakaviana ity. Nandrasan’ireo jiolahy tamina toerana mangigina ity farany ,rehefa avy nandray ny vidin’ombiny. Lavitra ny toeram-ponenany rahateo no nakana ny vola, ka mora tamin’ireo jiolahy no nanao velapandrika ny làlana…
Kortezy etsy sy eroa : Nisy maty nisy naratra omaly
Redaction Midi Madagasikara 25 janvier 2014 Kortezy, maty, naratra
Omaly angamba, tamin’ny tantaran’ny firenena, no be kortezy indrindra nifamezivezy teto an-drenivohitra. Tsy kortezy mariazy akory fa kortezin’ireo manam-pahefana isan-karazany sy ny vahiny manan-kaja maro. Mazava ho azy fa nifandraika tamin’ny famindrana ny lakilen’ny lapa tesy Iavoloha izany. Nifanaretsaka eran’ny tanàna ny kortezy avy atsy sy avy aroa. Ankoatra ny fahafatesan’ny zaza iray tetsy Ankadindratombo…
Mahamasina : Ankizy manomana BEPC nihazakazaka ,maty voadonan’ny fiara
Redaction Midi Madagasikara 16 janvier 2014 Ankizy, BEPC, Mahamasina, maty, voadonan’ny fiara
Notsaboina nandritra ny efatra andro teny amin’ny hopitaly ny ankizy vavy kely iray 16 taona vokatry ny ratra nahazo azy. Ny talata hariva anefa dia tsy tana ny ainy fa maty izy. Izany no vokatry ny fandonan’ny fiara ity ankizy ity tamin’ny sabotsy lasa teo tetsy Mahamasina. Mpiara-monina maromaro eny Anosibe Mandrangobato no nifamotoana vao…
Toamasina. Nitsangana tao amin’ny « morgue » : nesorina ny odiny vao tena maty
Redaction Midi Madagasikara 6 janvier 2014 maty, morgue, Nitsangana, Toamasina
Nitana ny sain’ny maro ny momba ilay jiolahy izay efa maty voatifitra kanefa nitsangana nitsoaka indray tao amin’ny tranom-paty. Tsy niala ny ainy raha tsy nesorina avokoa ireo zavatra miloko mena tao amin’ny efitrano nitazonana azy. Nandoa zavatra mavomavo izy ary avy eo nijinika ny rà tamin’ny tenany. Ity farany dia vokatry ny balan’ny basin’ny…
Hôpitaly Ravoahangy : Lehilahy narary tsy nanam-bola maty teo ambavahadin’ny « morgue »
Redaction Midi Madagasikara 4 janvier 2014 Hôpitaly Ravoahangy, maty, narary, teo morgue
Sambany no nisy toe-javatra sahala izao niseho teny ambavahandin’ny hôpitaly. Maro ireo olona hita faty an-dàlana, matin’ny fahantrana, hoy ny maro mpilaza Lehilahy iray no hita faty teo ambavahadin’ny “morgue” teny amin’ny HJRA, omaly maraina. Mifamahofaho be ihany ny vaovao voaray mikasika ity fahafatesana ity. Teo anivon’ny hôpitaly no nahalalana fa efa nandeha tao amin’ny…